အပျိုရိုင်းနုနုလေး – Grab Love Story
လွန်ခဲ့သော ရက် ၂၀ ခန့်တွင် ဦးစံမောင်မှာ မိခင်ဖြစ်သူ ကိစ္စအား ဖခင်ဖြစ် သူအား ဖွင့်ပြော တော့မည်ဟု ထပ်မန် ပြောဆိုလာပြန် သည်။ သူမ ဘက်ကလည်း ဖွင့်မပြောဖို့ တောင်းပန်ရင်း တဖြည်း ဖြည်း ဦးစံမောင် လေသံမှာ အကြပ် ကိုင်ချင် သည့် အရိပ့် အငွေ့လေးများ ပါလာခဲ့၏။
စကြားကြားချင်း သော်တာထွန်း တယောက် ပေါက်ကွဲ သွားတော့သည်။ မိခင် ဖခင် ထက် အသက် ကြီးသော သူစိမ်း ယောင်္ကျားအား ၁ပတ် ၁ခါ အလိုး ခံရမည် ဖြစ်၏။ သူမ အိမ်မှ ခြံစောင့် သက်ကြားရွယ်အို ဦးစံမောင် အား အော်ဟစ် ပစ်သည်။
” ဟာ ……… ရိုင်းလှ ချည်လား ……… အဘစံ ….. ကိုယ့် မြေး ….. အရွယ်ကို ….. ပြီးတော့ …. သော်သော်က ….. မိန်းမပဲ ယူမှာ …… မှတ်ထား ”
” အင်းလေ …… ဒါဆိုလည်း …… ညနေ ဆရာ ပြန်လာရင် …… ဖွင့် ပြောလိုက်ရုံပေါ့ ”
ဦးစံမောင် ပြောပြီးသည်နှင့် သော်တာထွန်း အနားမှ ထွက်ခွာ လာတော့၏။
နေ့လည်စာလည်း စားမရ အချစ်တော် ပိုးရတီ ဖုန်းဆက်တော့လည်း မကိုင်ချင် တော့ မိသားစု မပြိုကွဲဖို့ သူမပေါ် မူတည်နေ ၏။ ညနေ ရောက်လျင် ပျော်ရွှင်ဖွယ် မိသားစုလေး ပြိုကွဲ တော့မည်။
” သော်သော် … ဘာဖြစ်နာလည်း … နင့် မျက်နှာက ”
ဧည့်ခန်းထဲ မတ်တပ် ရပ်လျက် အနေထားဖြင့် တွေး နေစဉ် အကိုဖြစ်သူ အပြင်မှ ပြန်လာကာ လှမ်းမေး နေ၏။
” ဘာ …… ဘာ …ဘာမှ ……… မဖြစ်ပါဘူး …..ကိုကို ”
” ငါ့ …… ၃သိန်းလောက် …… ခဏပေးဟာ …… လကုန်မှ……. ပြန်ယူ ”
” ဟင် …. ဟုတ် ဟုတ် ”
” ဟော် …… ဘာဖြစ် နေတာလဲ …… သော်သော် ”
ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေသော ညီမ ဖြစ်သူအား ဇင်အောင် တယောက် ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်မေးနေ သည်။သော်တာထွန်း အိပ်ခန်းထဲ ဝင်ကာ ပိုက်ဆံ ယူပြီး ပြန်ထွက် လာ၏။ မိခင် ဖြစ်သူမှာ မနက်က တည်းမှ ချိန်းဝိုင်း သွားသဖြင့် ဖခင်ဖြစ်သူ လာကာနီးမှ အိမ်ပြန် ရောက်တော့မည်။
” ခု …… ကိုကို …… အပြင် ပြန်ထွက်မှာ မလား ”
” အေးလေ …… ဘာဖြစ်လို့ ”
” ဘာမှ …… မ ဖြစ် ပါ ဘူး …. ဟို ……. ဟို ……ဘယ် ချိန် ပြန် လာ မှာလည်း ….မေး မ လို့ ”
အက်ကွဲ နေသော ညီမ ဖြစ်သူ အသံကြောင် မျက် မှောင် ကုတ်ကာ စဉ်းစားရင်း တစုံတခု တွေးမိကာ ပြုံးနေမိ၏။
” ဟားဟား ……… နင် ………ပိုးရတီ ကို … အိမ်ခေါ်မလို့ … မလား ….. ငါ သဘော ပေါက်ပါတယ် … လွတ်လွတ် လပ်လပ် နေကြ … ငါ ဒိုးပြီ … ညကြမှ …… အိမ်ပြန် လာမှာ ”
ဇင်အောင် ထွက်သွား မှ ဟူးကနဲ့ သက်ပြင်းရှည် ကြီး ချကာ ခုံပေါ် ခဏ ထိုင်နေလိုက်သည်။ အိမ်တွင် လူရှင်း နေမှ ဖြစ်မည်။ မျက်ရည်များ ဝဲလာရင်း ဆုံးဖြတ်ချက် တခုအား မဖြစ်မနေ ချလိုက်ဟန့်ဖြင့် အောက်နူတ်ခမ်း လေး ကိုက်ထားမိ၏။ ခြေလှမ်း များက နောက်ဖေး ကားဂို ဒေါင်ဘက် ဦးတည် လိုက်တော့သည်။
” ဖိုးလုံး ရော …… အဘစံ ”
သူမ အိပ်ခန်းလေးထဲ ခြံစောင့် ဦးစံမောင် ဝင်လာ သည်နှင့် ချက်ချင်း မေးလိုက်၏။ သူမ အတွက် တအိမ်လုံး လူရှင်း နေမှ အဆင်ပြေမည် ဖြစ်သည်။
” မနက် ကတည်းက …… ဆရာနဲ့ ပါသွားတာလေ …… ညနေမှ ပြန်ရောက်မှာပါ မပူနဲ့ ”
အဲကွန်း ဖွင့်ထားသော်လည်း သော်တာထွန်း နှာခေါင်း ထိပ်လေး ချွေးသီးများ ဥနေရှာ၏။
ပြွတ် ….. ပလပ် ……. ပြွတ် ပြွတ် ………
” လှလိုက်တာကွယ် ”
သော်တာထွန်းမှာ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် ဖိုးလုံး ကိစ္စအား ဖခင် ဖြစ်သူအား ပြန်မပြောရန် ခြံစောင့် ဦးစံမောင် ဆန္ဒအား လိုက်လျောဖို့ ဆုံးဖြတ်ထား လိုက်၏။
ပထမဆုံး နူတ်ခမ်း ချင်း ဆွဲစုပ်နေရာ ဦးစံမောင် ပါးစပ်မှ ဆေးလိပ်နံ့ များ ကြောင့် အသက် အောင့်ထား လိုက်ရတော့သည်။ နူတ်ခမ်းချင်း ဆွဲစုပ်ရာမှ လည်ပင်းအား ရွေ့စုပ်စဉ် အလိုက်သင့် မော့ပေး နေ၏။ ရှပ်အင်္ကျီ လက်တိုအား ကြယ်သီးများ ဖြုတ် ကာ ဗလာစီယာ အပြင်မှ နို့အုံလေး အား ညှစ်ချေခံ ရပြန်သည်။
အင်္ကျီချွတ်ကာ ဗယာစီယာ ချိတ်လေး ဖြုတ်စဉ် မျက်နှာလေး ရဲတက်လာကာ မျက်ရည် စီးကျလာရ၏။နို့အုံထိပ်မှ နို့သီးခေါင်းလေးအား ဖိစို့ရာ သော်တာ ထွန်း တယောက် ခါးလေး ကော့နေပြန် သည်။ သူမ ဘဝတွင် ယောင်္ကျား တယောက်နှင့် အတူနေရန် ဘယ်တော့မှ မစဉ်းစား ခဲ့ပေ။ သို့သော် ခုချိန် ယောင်္ကျား တယောက်၏ အလိုးခံရ တော့မည်ကို တွေးရင်း ဝမ်းနည်းလာမိသည်။
သော်တာထွန်း ဝမ်းနည်း နေသလောက် ဦးစံမောင်မှာ တက်ကြွနေတော့သည်။ အသက်ကြီးမှ ကာမ စမ်းပွင့် နေသလို့ လိုးရတော့မည့် မိန်းမလှလေးမှာ ကျေးဇူးရှင် ဆရာသမား၏ သမီးချောလေး ဖြစ်၏။ ယောင်္ကျားစိတ် ပေါက်နေသူမို့ တမျိုးလေး ဖြစ်နေကာ လိုးချင် စိတ် များ ပြင်းထန် နေသည်။
သော်တာထွန်း မှာလည်း ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ် ခုန်နေ၏်။ မိန်းမ ချင်းသာ ဆက်ဆံဘူးရာ ယောင်္ကျားနှင့် အတူ မနေဘူး ခဲ့ပေ။ ဦးစံမောင် ပုဆိုးထဲမှ ထောင်နေသော အရာအား ကြည့်၍ ကြောက်နေမိသည်။
” သော်သော် ”
ကြောက်စိတ် ကြီးစိုးနေပေမယ့် ယောင်္ကျားစိတ် အငွေ့ အသက် လေးများ မပျောက်သေးပေ။ ကုတင်စောင်း ထိုင်လျက် အနေထားဖြင့် သူမရှေ့ ရပ်နေသော ဦးစံမောင် အား မျက်လုံး ပင့်ကြည့် လိုက်သည်။ အင်္ကျီအား ချွတ်လိုက်သဖြင့် ကြေး နီရောင် အသားအရည်ဖြင့် လက်မောင်း အိုးနှင့် ရင်အုပ်သားများမှာ တင်းတောင့် နေသေး၏။
အသက် ကြီးသူမို့ အသားအရည် လျော့တိ လျောရဲ ဖြစ်လိမ့် မည်ဟု ထင်ထားရာ အမြင် မှား သွား ခဲ့သည်။ အရင် အိမ်က ခြံစောင့် အဖိုးကြီးမို့ ပါသည့်ပါသာ နေခဲ့ သော်လည်း ယခုချိန်မှာ သူမအား လိုးတော့မည့် လူတယောက် အဖြစ် အနီးကပ် ကြည့်မိ နေ၏။
” နင် … ဟိုကောင်မလေးကို … လိုးတော့ … အတုနဲ့ လိုးတာလား ”
ယောင်္ကျားစိတ် ပေါက်နေသော်လည်း သူစိမ်း ယောက်ျားက တစ်တစ်ခွခွ မေးစဉ် သော်တာထွန်း တယောက် မိန်းကလေး ပီပီ ရှက်ရွံ့လာက မျက်နှာ လေး ရဲတက်လာသည်။ သူမ ခေါင်းငုံ့ထားကာ ဘယ်လိုပြောရမှန်း မသိ။
” နင့်မှာ ဒီလိုဟာ …… ရှိလို့လား ”
” အာ …. မ ……. မ ….. မ ရှိ ……..မရှိပါဘူး ”
သော်တာထွန်း ခြေဖျား လက်ဖျားများ အေးစက် လာရ၏။ဦးစံမောင်မှာ ပုဆိုးအား ခြေရင်း ပုံရင်း ဘယ်လက်နှင့် သူမ မေးစိအား ပင့်မကာ ညာလက်က လီးအား ကိုင်ပြ နေသည်။
” မိန်းမချင်း … လိုးတာက … အဖုတ်ချင်း ပွတ်ကြတာပါ …… တကယ့် လီးအစစ် နဲ့ ……… တွေ့ရင် …… စွဲလမ်း သွားရောပဲ ”
” တော် တော် …… တော်ပါတော့ …… အဲ လို တွေ ……… မပြောပါနဲ့ ”
ဦးစံမောင် ဘယ်လက်မှာ သော်တာထွန်း မေးစိ လေးအား ပင့်မ ထားရာမှာ နောက်စေ့ဘက် လက်ဖဝါးဖြင့် ဖမ်းကိုင် လိုက်ပြန်သည်။ ပန်းရောင် သန်းနေသော မျက်နှာ ချောချော လေးအား လီးဖြင့် ထိုးပွတ်နေသည်။ သော်တာ ထွန်း ခေါင်းနောက် ဆုတ်လည်း မရ ခေါင်းအား ဘယ် လက်က ဖမ်း ထိန်းထား၏။
သော်တာထွန်း အသက် အောင့်ကာ မျက်ရည်လေး ဝဲတက်လာရှာသည်။ သူမ နှာခေါင်းဝ နား လီးထိပ် ကပ်လာတိုင်း လချီးနံ့ ကြောင့် ပျို့တက် မတတ် ခံစားနေရသည်။ ဦးစံမောင်မှာ သော်တာ ထွန်း မျက်နှာ တပြင်လုံး လီးနဲ့ ထိုးကာ အားရ အောင် ပွတ်သပ်ပြီးမှ ကုတင်ပေါ် လှဲချပစ်၏။ အပေါ်ပိုင်း အင်္ကျီ ဗလာဖြစ်နေသော်လည်း ခါးပေါ်မှ ဒူးဖုံး ဘောင်းဘီ တိုလေး အား ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။
ဘောင်းဘီလေး ကျွတ် သွားသည်နှင့် ပေါင်ဂွလေး ထဲမှ စောက်ပတ်လေးအား ဖြဲကြည့်ကာ ဆီးခုံးပေါ်မှ စောက် မွှေးလေး များအား နူတ်ခမ်း ၂ခုဖြင့် ညှပ်ကာ ဆွဲဆွဲပေး၏။ တချက်တချက် အောက်ဖက်မှ အစိ လေးအား မေးစိဖြင့် ဖိချေလိုက်ပြန် သည်။
သော်တာထွန်းမှာ ပိုးရတီ အဖုတ်ယက်ပေးသည် ကိုသာ ခံစာဖူး၏။ အဖုတ်မျက်နှာပြင်အား မနုးမနှပ်ပဲ စောက်စိ လေးအား မေးစိဖြင့် ဖိချေ ခံရစဉ် မေးစိ ပေါ်မှ မေးမွှေး ငုတ်တို့လေးများ ကြောင့် စူးကနဲ့ ခံစားမှုအသစ် လေးထဲ ရောက်ရှိ သွားရသည်။
နို့အုံလေးအား ညှစ်ခံရချိန် မျက်လုံး များစင်းကာ ပေါင်တန်လေး မသိမသာ ဖြဲပေး နေမိ၏။ပေါင်ဖြဲ လိုက်သည်နှင့် စောက်ပတ်နီတာရဲလေး ထိပ်ရှိ အစိလေးမှာ သိသိသာသာ ထောင်ထွက်လာသည်။ ဦးစံမောင် တံတွေးမြိုချရင်း ပေါင်ကြားထဲ မျက်နှာ အပ်ကာ လျှာအပြားလိုက် ဖိယက်တော့သည်။
စောက်ပတ် နူတ်ခမ်းသားများ ချက်ချင်း ဖေါင်းကြွ လာကာ အတွင်းသား နုနုလေးအား နူတ်ခမ်းမွှေး ငုတ်တို့လေး များနှင့် ထိတွေ့မိရာ မျက်ဖြူလန်မတတ် ခံစား နေရ၏။ ခံစားမှု့များ ဖုံးကွယ် ထားသော်လည်း ခါးလေး ကော့ တက် လာကာ ပေါင်၂ဖက်ဖြင့် ဦးစံမောင် ခေါင်းအား ညှပ်ထားမိသည်။
ယောင်္ကျား တယောက်၏ ကာမ အထိ အတွေ့က စတင် လွှမ်း မိုးလာ၏။ စောက်စိလေးအား စုပ်ရင်း စောက်ခေါင်း ပေါက် ထဲ လက်ခလယ် ထိုးသွင်း မွှေခံ ရကာ ထိန်း ချုပ်မှူု့များ ပွင့်ထွက်ကုန်သည်။
” အားးးးး ….. အ ……. မ ……မ ……… မ ရ တော့ ဘူး …… ရပ် …… ရပ် …… အားးးးး ……. သွား ပြီ ……. ထွက်……… ထွက် ……. အမလေးးးး …… အ …….. အ ”
စောက်ခေါင်း ပေါက်လေးထဲမှ အရည်များ ပန်းထွက် လာရာ ဦးစံမောင် မျက်နှာနှင့် အိပ်ယာ ပေါ်ပါ ရွှဲနှစ်ကုန်သည်။ ညည်းအော်သံမျာ ကျယ်လာကာ တကိုယ်လုံး တွန်လိမ် နေ၏။ ယောင်္ကျား တယောက် ၏ အထိအတွေ့ မှာ ဒီလောက် ကောင်းမှန်း သော်တာ ထွန်း မစဉ်းစား ခဲ့ပေ။
ဦးစံမောင်မှာ စောက်ရည် ပန်းထွက်နေစဉ် သော်တာထွန်း ပေါင်ကြား ဒူး ထောက် နေရာယူကာ စောက်ခေါင်းဝ လေးအား လီးထိပ် တေ့ကာ ဖိသွင်းလိုက် တော့သည်။
” အ …..အမလေး ”
စောက်ပတ်လေးမှာ ကျဉ်းနေသဖြင့် ဒစ်ကြီးမှာ မဝင်ပဲ တစ်နေပြန်သည်။ ဦးစံမောင် အားထည့် ဖိသွင်းရာ သော်တာထွန်း ရင်ဘတ်လေး ကော့တက်လာ ၏။
” အမလေး …. သေပါပြီ …. အ ……. အား ……..နာလိုက်တာ အရမ်းပဲ …… သော်သော် …..မခံနိုင်ဘူး အရမ်းနာတယ် ……. အီးးး ……. အမေ့ ”
” ခဏလေးပါ … အောင့်ခံလိုက်နော် …… ဗျစ် …….. ဗျစ် ….. ဇွိ ….. ဖလွပ် …..ဘွတ် ”
ဦးစံမောင် ချော့ပြောနေရင်း ခါးအားဖြင့် ထပ်ဖိရာ ဒစ်မြုတ် နေရာမှ လီးတဝက် ကျော်ကျော် ဝင်သွား တော့သည်။ စောက်ခေါင်းထဲ လီးက ကြပ်နေသည့် အပြင် သော်တာ ထွန်းမှာ မခံနိုင်သဖြင့် အော်ဟစ် ရုန်းကန်နေပြန်၏။
” အမေ့ …..အားးး …… အီး ဟီး ……သေပြီ … သေပြီ …… အားးးး …… အီးးးးး ………… နာတယ် ……အဟင့် ဟင့် ”
ဦးစံမောင် မှာ အသက်ကြီးမှ မထင်မှတ်ပဲ ယောင်္ကျား စိတ် ပေါက်နေသော အပျိုရိုင်းလေးအား လိုးခွင့် ရနေသဖြင့် ရမ္မက် စိတ်များ ပြင်းထန်နေတော့၏။ ဆောင့်လိုး လိုက် တိုင်း ရင်ဘတ်လေး ကော့တက် လာကာ မချိမဆန့် ဖြစ်နေသော သော်တာထွန်း မျက်နှာလေးအား ကြည့်ရင်း မနားတမ်း ဖိလိုးပစ် သည်။ သော်တာထွန်းမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် အလိုး ခံရသည်ဖြစ်ရာ ကာမ အရသာ မတွေ့ သေးပဲ နာကျင် မှု့များ ကြီးစိုးနေရှာ၏။
” အီးးးးးး ………အီးးးးးးး ……….. အ …….. အမေ့ …… အားးးးးးး ……. အ အ ……..အဟင့် ဟင့် ….. ဖြည်း ဖြည်း ………အ …. နာတယ် …… အရမ်းနာတယ် ဖြေးဖြေး လုပ်ပါ …………… အဘစံ ရယ် …..အ ဟင့် ဟင့် ”
စောက်ပတ် အကျဉ်းလေးထဲ လီးကြီး မဆန့်မပြဲ ဝင်ထွက် နေရာ သော်တာထွန်း တောင့်ခံလေ လီးအား ညှစ်ပေး သလို ဖြစ်ကာ ဦးစံမောင်မှာ အရသာ ထူးကဲ နေတော့သည်။ တဖြည်းဖြည်း စောက်ရည်များ ကြောင့် လီး အဝင်အထွက် ကောင်းလာရာ သော်တာ ဦး တယောက် ငြိမ်ကျ သွားရ၏။
စောက်ခေါင်းလေး ထဲ လီးအရည်ပြားဖြင့် ပွတ်တိုက် ဆွဲနေရာ အလိုးခံရ သည့် လီး အရသာလေး စတင် ရရှိ လာသည်။ လီးဖြင့် အလိုးခံရာ ဒီလို ကောင်း မှန်း အစက မသိသော် လည်း ခုချိန် အလိုးခံရသည့် အရသာမှာ နာလဲနာ ကောင်းလဲကောင်း မှန်း သိရှိ လာ၏။ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်ရလာရာ မသိမသာလေး အောက်မှ ပင့်ကာ ဆောင့်ကြည့်လိုက်သည်။
ဆီးခုံး ချင်း ကပ်သွား တိုင်း ဦးစံမောင် လမွှေးအုံ အောက် ဖက်နေရာ နှင့် ခေါင်းထောင် နေသော စောက်စိလေး ထိမိကာ တကိုယ်လုံး အီ စိမ့်နေအောင် ကောင်းလာ ခဲ့၏။ သော်တာထွန်း ပင့်ဆောင့် ပေးသည်ကို ရိပ်မိ သည်နှင့် ဦးစံမောင်မှာ ကုတင်တိုင်များ ရမ်းခါနေ အောင် ဖိလိုးတော့သည်။
” သော်သော့် … စောက်ဖုတ် လေးက …… အရမ်းလိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာ …….. ရှီးးးးး… အင့် …..ဗျစ် ဗျစ် ……… ရှီးးးးးးးးးးး ”
သော်တာထွန်း ကိုယ်လုံးလေး တုန်ခါနေပြီး မျက်နှာ လေး ရှုံ့ကာ အံကြိတ် ခံနေရှာသည်။
အနည်းငယ် နာကျင် သေးပေမယ့် နာကျင်မှု့ထက် လီးအရသာက သာလွန် နေပြန်၏။
” အ …… အဘစံ …. အ အားးးး ”
လီးဝင်လာတိုင်း ဒစ်ကြီးမှ စောက်ခေါင်း အတွင်းသား များအား ဖိပွတ်ပြီး လီးပြန် အထွက် အတွင်းသား များအား ချိတ်ဆွဲ နေသဖြင့် နာကျင်မှု့များ ပျောက် ကာ လီး အရသာ ခံစားလာရတော့သည်။ ဦးစံ မောင်မှာ သော်တာ ထွန်း ခံနိုင် လာသည်နှင့် ဒုတိယ အကြိမ် မနားတမ်း ဆောင့်လိုးပြန်၏။
” အမေ့ …. အား …….လိုး လိုး ……အထဲက …. ပြီး ပြီးးးး …. အားးးး … အဟင့် ….. ဆောင့် လိုး ပေး ……. အင့် ………… အားး…… ထွက်ပြီ … ထွက်ပြီ …… ဟူးးးးး ရှီးးးးးး ”
ဦးစံမောင် စိတ်ရှိသမျှ ဆောင့်လိုးနေရာ သော်တာ ထွန်း ပြီးမှန်း သိသည်နှင့် အချက် ၃၀ခန့် ဆက်လိုး ရင်း လီးအား ဆွဲထုတ်ကာ စောက်ပတ် နီတာရဲ လေးပေါ် ပန်းထုတ် လိုက်တော့သည်…။